Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अवैध मोबाइल बन्द गर्न यस्तो तयारी – Emountain TV
काठमाडौं, २९ फागुन । अवैध मोबाइललाई बन्द (ब्लक) गर्न विनियमावलीको तर्जुमा भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाताको सहयोगमा विनियमावली बनाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । विनियमावली बनेलगत्तै अवैध मोबाइल बन्द गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु किन्न ग्लोबल टेन्डर गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, अवैध रुपमा भित्रिएर प्रयोग भएका, चोरिएको वा हराएका मोबाइल चलाउन नदिन यो प्रभावकारी हुनेछ ।
२०७३ वैशाख १ गतेदेखि प्राधिकरणले नेपाल भित्रिएका र प्रयोगमा रहेका मोबाइलको पहिचान नम्बर दर्ता सुरु गरेको थियो । हालसम्म करिब एक करोड यस्ता नम्बर दर्ता भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । करिब दुई बर्षको अवधिमा प्राधिकरणले ९५ लाख ५३ हजारभन्दा बढी यस्ता नम्बर दर्ता गरेको छ ।
हरेक मोबाइल सेटमा एक विशेष प्रकारको नम्बर हुन्छ, जसलाई इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टीटी (आइएमईआई) भनिन्छ । हरेका मोबाइल सेटमा आइएमईआई नम्बर हुन्छ । आजको कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।
‘दुधमा युरिया मल लगायतका अखाद्य बस्तु मिसाएका छैनौ’
३३ ब्राण्डका दुधमा हानिकारक कोलिफर्म
कुन विषय पढ्न कति जीपीए